Raha nisy olona nanery anao hisambotra ny fifandraisanao, dia ho tsapanao tokoa izany. Hahita ny fisainana ianao, fa tsy ny "madio" rehetra eto. Saingy satria mety hisy fiantraikany amin'ny fiheveranao ny mpiara-miasa iray ny fanimbana, dia tsy ho tezitra ianao noho ny eritreritra momba ny fisarahana amin'ny hoavy, satria ankehitriny ny zava-drehetra mifandray aminy dia manana "prefix".
Kolikoly sy fiainana sosialy
Ny vokatry ny fanimbana ny fifandraisana dia manitatra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana. Ny fiovanao dia miova ho an'ny rehetra. Ho very ny fahatokisanao amin'ny asa, hiharatsy ny fifandraisanao amin'ny mpiara-miasa, miaraka aminao ny fifandonana sy ny horohoro, eny fa na dia ny olona tsy fantatra aza.
Ny zava-misy dia ny fanimbana ny fifandraisana dia manova tanteraka ny fisehoanao eo imason'ireo olon-kafa, ary koa ny fisehon'ny mpiara-miasa eo imasonao. Samy tsy tonga any ivelany ny roa, fa tsy dia mahafinaritra loatra. Noho izany, dia manisa ny zava-misy fa izao ianao dia vita amin'ny "fifangaroan'ny" fifandraisana ary hahita olona hafa tsy mendrika izany. Fa hotanterahiko ny ozona amin'ny ozona.
Ny soritr'aretina voalohany eo amin'ny fifandraisana dia fifandirana tampoka, izay tsy misy fanamarinana ara-dalàna. Na izany aza, ianao sy ny namanao ao an-tsainao dia mahita foana ny anton'izany, fa tsy hoe mahay mandanjalanja, fa mandiso fanantenana.
Eo anelanelanao, very ny angovo angovo. Lasa akaiky, tsy mahafinaritra, mampatahotra ary tsy mahazo aina ianao. Eo ambany alahelohanao dia hivoaka ny trano ianao, hatory ary hihinana manokana.
Ampiarahanao am-pitiavana ampahany amin'ny "tsy" ho an'ny namanao. Tsy te-hanana ankizy mahazatra ianao, tsy te-hikarakara azy, tsy te hiaraka amin'ny fialantsasatra, sns.
Ny kolikoly amin'ny tsy fitovian'ny fifandraisana dia tsy mahomby amin'ny psychologie, fa koa amin'ny fizika momba ny fifatoranao. Ho very ny fiheveran'ny lahy sy ny vavy. Ny lehilahy dia afaka manjary tsy milefitra (tsy misy vanim-potoana), ary vehivavy iray mijaly noho ny fanaintainana ao ambany kibo.
Ianao, tahaka ireo karazana fahasimbana hafa rehetra, dia hampijaly ny nofy ratsy . Ny tena "ratsy" ao amin'ny nofinao ihany no ho ny olona tianao indrindra. Hanenjika anao izy, hanenjika anao, hovonoina isaky ny alina.
Inona no omen'ny mpiompy ny fotoam-bavaka?
Fikomiana amin'ny Diovy Alahady amin'ny fotoana rehetra
Fombam-pivavahana fety fety
Fombafomba ho an'ny fahatanterahan'ny faniriana
Fety fanao amin'ny androntsika
Ny anjaran'ny lehilahy avy amin'ny tompovavy - vokany
Ny fomban'ny Batemy
Ny alikan'ny maso ratsy
Fampahalalana mikasika ny hemorrhoids
Ny fanosorana rongony - ny dikany
Tetika sy fombafomba ho an'ny Trinite ho harena
Fiakanjo fampakaram-bady fohy 2016
Aorian'ny filentehan'ny masoandro ny endrika mena - inona no tokony hatao?
Dokotera Gavrilov - Weight Loss
Mitefika ny moka avy amin'ny moka
Ny antony mahatonga ny fandrobana ny vehivavy
Ahoana no hampianarana zazakely iray hatoriana amin'ny alina?
Nahoana isika no manonofy momba ny faty?
Bella Hadid amin'ny "akanjo" marevaka amin'ny fampisehoana Alexander Vauthier ao Paris
Ahoana ny fanasitranana haingana ny stomatitis ao amin'ny vava?
Lanonana fandriana rongony
Jeans ho an'ny vehivavy bevohoka